नजिक न्युज | तीज गीतको नाममा र गाईजात्रे र प्यारोडी आए : मञ्जु पौडेल
तीज गीतको नाममा र गाईजात्रे र प्यारोडी आए : मञ्जु पौडेल
२०६३ मा विरहको तीज…गायनसँगै गायिका मञ्जु पौडेलले तीज गिती यात्रा सुरु भएको थियो । यही गीतबाट पौडेलले आफ्नो गायन यात्रालाई अघि बढाएकी हुन् । यो अवधिमा गायिका पौडेलले तीन दर्जन गीत ल्याइसकेकी छन् । २०६३ देखि गायनमा आए पनि केही समय उनी विभिन्न एफएम र नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध भइन् । एकदशकयता उनी गायनमा सक्रिय बनेकी छन् । प्रायः लोक र लोकदोहोरीमा आफ्नो परिचय बनाएकी मञ्जुले लोक आधुनिक र लोक पप गीत पनि बजारमा ल्याएकी छन् । चुरोट लाइटर…, तलतल लाग्यो मलाई…, जालै रुमाल…, तारो हुन्छ फेरि…, हजुरैले हो…, दामी छरेन्त….उनका चर्चित गीतहरू हुन् । यस्तै, तीज गीतमा छम्मा छम्मा…, बर्गर पिजा…, आदी उमेर…, खैत बाबा बुझेको कुरा बरीलै… जस्ता थुप्रै तीज गीत मञ्जुले बजारमा ल्याइसकेकी छन् । यसैक्रममा उनले यसपटक तीजका लागि भनेर नयाँ तीजैमा…दुई दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएकी छन् । तीज गीतको नाममा विकृति बढेको बेला उनले मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर यो गीत ल्याएकी हुन् । यसै प्रसङमा राजधानी दैनिकका डब्बु क्षत्रीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कति भयो तीज गीत बजारमा ल्याउन थाल्नुभएको ?
एक दशकयता हरेक वर्ष एउटा तीज गीत ल्याउने गरेको छु । मेरो गायन यात्रा नै १४ वर्षका लागि तीज गीतबाट सुरु भएको हो । दर्शक–श्रोताले पनि मेरो तीज गीत बढी रुचाइदिनुभएकाले हरेक वर्ष तीज गीत ल्याउने गरेकी छु ।
तीज गीतबाट देश विदेशको यात्रा पनि गर्नुभयो हैन त ?
धेरै नै गरें । हुन त श्रोता–दर्शकले मलाई सबै गीतसंगीतमा उत्तिकै मायाँ गर्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ म कार्यक्रम सञ्चालक पनि भएकाले मेरो उद्घोषण पनि त्यत्तिकै मन पराउनुहुन्छ । त्यसैले कार्यक्रम सञ्चालकहरू र दर्शकको रोजाइमा पर्ने गरेकी छु । तीजकै लागि विगतमा जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतसहित युरोपियन मुलुक दुबई, कतार, मलेसिया, हङकङ, सिंगापुरजस्ता विभिन्न एसियाली देशहरूमा गाएर गीतसंगीतसँगै स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेकी छु ।
यसपटक विदेश कहाँकहाँ थियो र रोकिँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
यसपटक क्यानडा, जापान र दुबईमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पक्काजस्तै भएको थियो । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा यसपटक दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिन पाइएन । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई मिस गरिरहेकी छु । किनकि विगत आठ वर्षदेखि विदेशमै रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग तिज मनाउँदै आएको थिएँ । यसपटक उहाँहरूलाई सम्झँदै घरमा बसेर आमासँग तीज मनाउँदै छु । किनकि आमासँग तीज नमनाएको पनि आठ वर्ष नै भएको थियो । तीज मात्र हैन, अन्य चाडबाड पनि मेरो गायन प्रस्तुतिका लागि विदेशमै बित्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय तीजको नाममा रक र पप गीत ल्याएर तीजको मौलिक संगीतमा प्रहार गरिएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस्ता गीतहरू मलाई तीज गीत लाग्दैन । यी सबै प्यारोडी गीतहरू हुन् । अहिले तीज गीत गायनले सीमा नाघेको छ । अहिले एकथरीका गायक गायिकाको तीज नामका गीतहरू रत्यौली, गाईजात्रे, प्यारोडी भएका छन् । तर, यी सबै क्षणिक मात्र हुन । मौलिक गीत कालजयी हुन्छ । त्यसैले, मैले तीज गीतमा आफ्नो ट्रयाक छोडेको छैन । फ्युजन भए पनि मर्म मारेको छैन । र, आउँदा दिनमा पनि तीजको मौलिकमा मार्ने पनि छैन ।
तीज गीतका नाममा रत्यौली, प्यारोडी, रक, गाउन प्रचलन किन सुरु भएको होला र यस्तालाई सम्बन्धित निकायबाट किन कारबाही नभएको होला ?
यो सस्तो चर्चाका लागि गरिएको हो । टिकटकजस्ता सामाजिक मिडियाले उनीहरूलाई उचाल्ने र चाँडै चर्चामा ल्याउने हुँदा उनीहरूले यस्तो अँगालेको हुन् । तर, देखिरहेको छ कि उनीहरू लामो समयसम्म टिकेका छैनन् । गीतसंगीतको सेन्सर बोर्ड नभएको हुँदा जसले जे गर्दा हुन्छ भन्ने मनपरीतन्त्र भएको छ । अहिलेको यो विकृतिलाई हेर्दा र गीतसंगीतलाई बचाउनका लागि गीतसंगीतसम्बन्धी सेन्सर बोर्ड हुन आवश्यक भइसकेको छ । सेन्सर बोर्ड नभएको अहिलेको अवस्थामा यस्ता विकृतिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही बेलाबेलामा गरेको हो । हामी आफैं छाडा भएर गीतमा यस्ता विकृति आएको र यस्ता गीतले महŒव पाएका हुन् । अहिले नेपाली मौलिक गीतसंगीत संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले हामी आफैंले सचेतता अपनाएर मौलिकपनलाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । आशा गरौं, त्यो दिन पनि छिट्टै आउनेछ ।
बिहिबार ०८, साउन २०७७ ०६:०४ मा प्रकाशित
हलिउड अभिनेत्री ओलिभियाको १०४ वर्षको उमेरमा निधन
बेनिशाको कत्थकदेखि कन्टेम्पोररीसम्म दख्खल
विवाहबारे खुलिन् सिमोन
'गणितसँग डराउनु पर्दैन'